Taranja Haiady :: Sahirana amin’ny famerenana fifaninanana ny Taekwondo • AoRaha
Taranja Haiady Sahirana amin’ny famerenana fifaninanana ny Taekwondo
Hanahirana ny hikarakara fifaninanana ofisialy ho an’ny taranja haiady na efa mahazo alalana aza ny fanatanterahana hetsika arapanatanjahantena eto Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Lafiny maro no mampananosarotra ny fikarakarana fifaninanana, raha ny nambaran’ny avy ao amin’ny Federasiona malagasin’ny haiady Taekwondo (FMT) manokana.
« Antony voalohany ny famerana ho roanjato ny isan’ny olona ao anaty efitrano, izay tsy azo eritreretina satria efa maherin’io isa io raha ny mpikatroka amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Madagasikara fotsiny. Eo ihany koa ireo fepetra arapahasalamana hafa tsy maintsy harahina, toy ny fanaovana aron-tava izay sarotra ho an’ny taranja haiady rehetra mihitsy », hoy Rakotobe Rivo, tale teknika ao amin’ny FMT.
Ankoatra izay, mitoetra ny fahalainan’ny ray amandrenin’ny mpikatroka amin’ny fampandraisana anjara ny zanany amin’ny fifaninanana noho ny fahatahorana ny lafiny fahasalamana, raha ny fanampim-panazavan’itsy tompon’andraikitra itsy hatrany.
Maro amin’ireo federasiona miahy ny haiady no nisafidy tsy hanatanteraka fifaninanana aloha, raha tsy amin’ny taona ho avy mihitsy, tahaka ny taranja karate. Mitohy kosa anefa ny fanazarantena ho an’ny atleta ary saika efa misokatra avokoa ireo toeram-panomanan-tena manerana ny Nosy.
Judo – Tompondakan’i Afrika :: Hampiantrano ny fifaninanana i Madagasikara